अग्रगमनका नयाँ ठेकेदार :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ११:०४ English
अग्रगमनका नयाँ ठेकेदार :: अधिवक्ता दामोदर पौडेल
दलको जिल्ला अधिवेशनका लागि प्रचण्ड र बाबुरामहरू रोल्पा पुगेछन् । ०६९ माघ ४ गते भाषणको क्रममा उनीहरूले भनेछन्, ‘अग्रगमनको पक्षधर एक मात्र दृढ दल एनेकपा माओवादी मात्र हो, यसबाट फुटेर एकथरीले ठूलो गल्ती गरेका छन् र क्रान्तिलाई धोका दिएका छन् ।’ बाबुराम र प्रचण्डबाट दिइएको यो अभिव्यक्ति एकप्रकारले ठीकै हुन् । किनकि, अभिव्यक्ति सही होस् या नहोस् हरेक दललाई आफ्नो दलको विचार या बाटो नै राम्रो हो भन्ने अधिकार छ । तर, कम्युनिस्टहरू आफ्नो विचारलाई मात्र राम्रो भनेर अरूलाई प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्छ भन्छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू आफ्नो विचार राम्रो भनिरहँदा पनि अरूको विचारलाई वैचारिक रूपमा निषेध नै गर्न भने खोज्दैनन् । नयाँ सम्भावनालाई कम्युनिस्टहरूले जस्तै स्वीकार गर्दछौँ भन्ने तर बाटो नै बन्द गर्नेजस्तो कार्य लोकतन्त्रवादीले गर्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी दल नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य पनि यही हो । बीपीले त भनेकै थिए कि नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक किसिमले साम्यवादको स्थापना गर्न चाहन्छ ।
उनले प्रस्टैसँग साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदिए समाजवाद अर्थात् हामीले बुझ्ने गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ भनेका हुन् । हुनत कांग्रेस सरकारमा हुँदा साम्यवादका लागि केही नगरेकाले यसले साम्यवादी भन्नु हास्यास्पद हो कि ? जस्तो पनि लाग्ला । वास्तवमा त्यसो होइन, कम्युनिस्टहरू र सबैभन्दा परम्परावादी कम्युनिस्ट माओवादी सरकारमा हुँदासमेत यसले कुन काम साम्यवादका लागि ग¥यो ? के आफ्ना लडाकुहरू र घाइतेहरूमध्ये केहीलाई पैसा बाँडेर साम्यवाद आउँछ ? भ्रमणमा पैसा खर्च गरेर, धेरै सल्लाहकार र मन्त्री राखेर साम्यवाद आउन सहयोग हुने हो कि ? विरोधी दलका कार्यकर्तालाई मारेर वा जिउँदै सञ्चारकर्मीलाई मार्नेलाई आममाफी दिएर साम्यवाद आउने हो ? या विरोधीहरूलाई मारेर आतङ्कको शासन कायम गरेर आफूद्वारा नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमबाट समानता र साम्यवाद भने पछि साम्यवाद आउने हो ? यसको जवाफ जनतालाई दिए कल्याण हुने थियो ।
कांग्रेसले साम्यवादका लागि धेरै काम गरेको छ र कम्युनिस्टहरूले गर्न नसकेको काम गरेको छ तर हामी साम्यवादी र गरिबका मानिस भनेर बढी प्रचार गर्न सकेको छैन । यो दलसँग प्रचार गर्ने लुटेराहरूले त्रास देखाएर जनतालाई भ्रम पार्ने संयन्त्र पनि छैन । माओवादी हिंसाभन्दा पहिला यो दलको सरकार हुँदा देशको आर्थिक विकास दर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएको साम्यवादतर्फको पाइलो हो । उद्योगहरू खुल्नु, जनताले मजदुरी गर्न पाउनु, यातायातको विकास हुनुसमेत साम्यवादका पाइला हुन् अर्थात् विकासले साम्यवाद ल्याउन सहयोग गर्दछ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो । कम्युनिस्टहरूको साम्यवाद अनौठो छ । उनीहरूका अनुसार सत्ता कब्जा गर्ने, सेना समेतमा पकड राखेर जनताले उनीहरूको विरोध गन नसक्ने बनाउने र साम्यवाद आउन थालेको घोषणा गर्ने अनि साम्यवाद आइसक्यो भने पनि कसले विरोध गर्ने ? तर, त्यहाँ साम्यवाद विकासबाट होइन, कागजमा मात्र आएको हुन्छ । रुसमा समाजवाद वास्तवमा आएको भए त्यो भत्किने थिएन । चीनमा समाजवाद आएको भए पुँजीवादी अर्थतन्त्र आउने थिएन । समाज विकासक्रम नागवेलीजस्तो हुन सक्दछ तर यो पछि भने फर्कंदैन भन्ने मान्यता कम्युनिस्टहरूकै अनुसार ती देशमा पूरा भएन । यो तथ्यलाई साम्यवादीहरूले स्वीकार गर्नभन्दा कमजोरी सतही रूपमा खोज्ने गर्दछन् वा विभिन्न उट्पट्याङ तर्क दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दछन् । साम्यवाद त विरोधीहरू हुँदा पनि उनीहरूले पनि विरोध गर्न नसक्ने गरेर आउँछ र विकासको माध्यमबाट आउँछ । बन्दुकबाट होइन भन्ने कांग्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ ।
लेनिनले एक देशमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी एक मात्र हुने बताएका थिए । माओले एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको मातहतमा अन्य दलहरू रहन सक्ने तर तिनीहरूले साम्यवादी विचारको विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए । तिनै दुईवटा कम्युनिस्ट नेताहरूको विचारबाट समेत हाम्रा कम्युनिस्टहरू सञ्चालित छन् । कम्युनिस्टहरू नीतिप्रधान हो नेता होइन भन्ने गर्दछन् तर नेताको आधारमा नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म सयभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठन भएका छन् । के ती सबै नीतिका भिन्नताको कारणले गठन भएका थिए ? थिएनन् । थिए भने कम्युनिस्टहरूका कतिथरी नीति हुन्छन् र कुनचाहिँ पक्का नीति हो भन्नेबारेमा सबैका आ–आफ्नै डम्फु भएकाले कसलाई विश्वास गर्ने ? विश्वमा अहिले त उत्तर कोरियामा तीन पुस्ता नै राजासरह भए, क्युवामा दाइपछि भाइ राष्ट्रपति बनेका छन् । कम्युनिस्ट नेताहरूको रतिक्रिया नै सबैभन्दा क्रान्तिकारी हुने हुँदा स्वाभावैले उनीहरूका सन्तानहरू देशका अमूल्य निधि हुन् भन्नुपर्ने भयो । अब मानुषी र प्रकाश नै हामीहरूका सन्ततीका नेता हुने कल्पना गर्ने कि ? दुवैजना नेता बन्न नसक्नेमा उनीहरूलाई दुई सदस्यीय जनयुद्ध गर्न लगाउने र जसले जित्छ उसैलाई क्रान्तिकारी सर्वोच्च नेता मान्ने कि ?
बाबुराम आफ्नो कार्य जति अग्रगमन भन्दै छन् । केही वर्ष पहिलाको गोरखापत्रमा उनले कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता आएपछि विदेशी दलाल, दलाल पुँजीपति आदिलाई दल खोल्न नदिने भन्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नै विदेशीको कारणले बनेको आसय व्यक्त गरेपछि उनले विदेशी दलाल आदि घोषणा गर्न पाएमा त्यो गरेकाहरूमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन पाउनुपर्छ भन्नेहरू हुन्छन् होला । विदेशी दलाल विदेशको सेल्टरमा विदेशीले लुकाएर राखेको ठाउँमा होइन पहाडका कन्दरामा नेपाल जपेर दुःख गरेर बस्ने पाइनेछन् । राष्ट्रविरोधी चस्मा लगाएपछि त्यसो हुन्छ नै ।
उता देशकी प्रथम महिला अर्थात् हिसिला यमी महिला अधिकारकर्मीले आन्दोलन गरेको ठाउ“मा रत्यौलीको जस्तो गरेर नाचिछिन् । त्यहाँका कर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर तुरुन्त समस्या समाधान गर्ने बताउने र काम गर्नेतिर उनको ध्यान गएन । उनलाई नाच्न नै रमाइलो लागेछ, महिलाका पीडा नाचेर अन्त्य गर्ने माहत्म्य उनले बनाएको हुनुपर्छ । प्रथम महिलालाई आफ्ना माइतीतिरकालाई जागिर दिएका आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । जनताले यो पनि बुझ्नुपर्ने हो कि जन्मेदेखि नै बसेको ठाउँकाहरूको इमानदारी थाहा भएर उनले यसो गरेकी हुन् । उता प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल पहिला रातो पदार्थमा विवादित हुन् । उनका आफन्त अस्वाभाविक रूपमा सम्पन्न बनेको मानिसले महसुस गरेका छन् ।
देशमा समावेशीको सबैभन्दा चर्को नारा दिने पनि माओवादी नै हो । तर, यसले गठन गरेका धेरै जातीय मोर्चाहरूमा बाहुन–क्षेत्रीहरूको बहुमत छ । कतै अरू थर राखे पनि अर्को थरमा विवाह गरेका महिला बाहुन–क्षेत्री नै छन् । बाबुरामले अब सबैलाई अचम्मित गरेर नेवारलाई प्रधानमन्त्री दिएर सरकार परिवर्तन गर्न सक्नेछन्, यो महिलामाथिको सम्मान पनि हुनेछ । अर्थात् हिसिला यमीको थरमा बाबुरामले आफूलाई परिवर्तन गरेर बाबुराम यमी अर्थात् कोष्ठभित्र नेवार राख्नु साह्रै क्रान्तिकारी हुने थियो । आखिर विकास गरेर र जनताको हित गरेर होइन जनतालाई डर र भ्रम दिएर नै हामी क्रान्तिकारी बनेको हो ।
अन्त्यमा, यो पङ्क्तिकारको थर पौडेल हो । थर सच्याएर पोडे थरको नेवार बनाएर मुक्ति प्रधानको स्थानमा महान्यायाधिवक्ता बनाइदिए ठूलो कल्याण हुने थियो । बाहुन–क्षेत्रीहरूका लागि बाहुन नै प्रधानमन्त्रीका कानुनी र राजनीतिक सल्लाहकार र त्यसमा पनि पौडेल नै, जनजातिका लागि प्रधानमन्त्री पनि यो पङ्क्तिकार पनि जनजाति हुने अवसर प्राप्त हुने थियो । युद्धअपराधको डर नभएकाले यो पङ्क्तिकार विदेशमा कार्यक्रममा भाग लिन पनि जान सक्ने थियो । पहिला अख्तियारको आयुक्तका लागि यो पङ्क्तिकारले दरखास्त हालेको थियो । त्यो पदमा काम गर्नेले भ्रष्टाचारको परिभाषामा आफ्नो परिवार र दलका लागि काम गरेकोमा भ्रष्टाचार नमानिने कानुनमा नगरेसम्म ठीक नहुने महसुस गरेकोले यो पङ्क्तिकार महान्यायाधिवक्तामा दरखास्त दिन उचित सम्झन्छ ।
२४ माघ २०६९, बुधबार ०७:१९ मा प्रकाशित